Vietnam-Madagasikara : Hamafisina ny fifanakalozana amin’ny sehatra fampandrosoana -
AccueilRaharaham-pirenenaVietnam-Madagasikara : Hamafisina ny fifanakalozana amin’ny sehatra fampandrosoana
Mamita iraka eto Madagasikara ny delegasiona parlemantera vietnamianina tarihin’ingahy Phung Quoc Hien, filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena any Vietnam. Ny alatsinainy antoandro teo no noraisin’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha ireto delegasiona ireto izay miisa 12. Nifantoka teo amin’ny fiaraha-miasan’ny firenena roa tonta ny dinika nifanaovana. Nambaran’ny lefitry ny Antenimieram-pirenena Vietnamianina ity, Phung Quoc Hien fa ny hanamafisana ny fifandraisana eo amin’ny samy parlemantera malagasy sy Vietnamianina no tena anton-diany. Eo koa ny fanamafisana be be kokoa ny fifanakalozana eo amin’ny sehatry ny fampandrosoana samihafa, indrindra ny sehatry ny toe-karena sy vola, ny varotra sy ny fampiasam-bola. Ankoatra izay, dia hotohizana ny fiaraha-miasa efa nisy toa ny eo amin’ny fambolena (vary) sy ny jono izay heverina hitarina eo amin’ny lafin’ny teknolojia vaovaon’ny fifandraisana sy ny fifandraisan-davitra.
Taorian’izay, dia nihaona tamin’ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier ity delegasiona ity. Nambaran’ny lehiben’ny governemanta fa tsara ny fiaraha-miasa, ary azo heverina ny fametrahana fifanakalozana malalaka eo amin’ny tany roa tonta. “Firenena tsara alain-tahaka i Vietnam eo amin’ny dingana vitany izay nahazoany fahombiazana eo amin’ny fandrosoana ara-toekarena ka hataon’i Madagasikara fitaratra”, hoy ny lehiben’ny governemanta. Notohizany hoe, “sehatr’asa maro no omena tosika bebe kokoa eto Madagasikara amin’izao fotoana izao, toa ny sehatry ny angovo sy ny fametrahana fotodrafitrasa eny ambanivohitra; ka azo atao ny miantso ny mpandraharaha vietnamianina hampiasa vola eto Madagasikara sy hanampy antsika amin’ny fampandrosoana ara-toekarena.” Tsiahivina fa nanomboka ny 18 desambra 1972 ny fifandraisana diplomatika teo amin’ Vietnam sy Madagasikara. Ankoatra ireo lehiben’ny andrim-panjakana, dia nihaona tamin’ny tompon’andraikitra ny varotra, ny indostria ary ny toe-karena ihany koa ity lefitry ny Antenimieram-pirenena Vietnamianina ity.
Nampangaina ho mpilaza lainga hatrany ny gazety Triatra raha nitatitra ny vaovao mikasika an’i Mamy Ravatomanga. Akory anefa ny hagagan’ny maro rehefa nivoaka tamin’ireo hainoamanjery vahiny, ny raharaham-pitsarana miandry ity mpamatsy vola ny MAPAR ity, ...Tohiny